Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0712 lak
Lesona 07 : Mandray ny fiadiana rehetra mba hahazo fandresena
10 - 16 Nov. 2012
Alakamisy 15 Nov.
Miantomboka amin’ny hoe: “mivavaha mandrakariva” ny Efes. 6:18 ary milaza izany fa misy ifandraisany amin’ireo andininy teo aloha ny fivavahana. Ny tiana hambara dia hoe mitaky ny fiankinana amin’Andriamanitra ny fitafiana, ny fitondrana ary ny fandraisana ny akanjo fiadian’ny lanitra rehetra. Noho izany, “ny vavaka dia tsy hoe fitaovam-piadiana anankiray hafa tsy akory. Izany dia toe-tsaina na fomba natao hitondrana ny akanjo fiadiana iray manontolo mihitsy ary koa hiadiana ny ady. Mampirisika mafy eto i Paoly ny hanaovana izany ho foto-pisainana maharitra, toe-tsaina izay tia mifandray mandrakariva amin’Andriamanitra.” — SDABC, b. 6, t. 1046.
Diniho amim-pamalinana tsara ny Efes. 6:18. Inona ireo teny na andian-teny tafiditra ao anatin’ny fananarana ataon’i Paoly ho an’ny Kristianina mikasika ny vavaka ka mitaky fiambenana sy fankatoavana?
Mampirisika matetika ny olona ny Baiboly mba tsy hitsahatra amin’ny fivavahana (Lio. 18:1; Rôm. 12:12; Fil. 4:6; Kôl. 4:2; 1 Tes. 5:17). Eo amin’ny tontolon’ny ady ifanaovana amin’ny herin’ny ratsy izay resahin’i Paoly ao amin’ny Efes. 6 anefa, dia tsindriany tsara fa tokony haroboka ao anaty vavaka avokoa ny zava-mitranga rehetra eo amin’ny fiainana. Tsy zavatra mandehandeha ho azy amin’ny Kristianina anefa ny manana izany fisainana izany, indrindra indrindra satria fironana voalohany tonga ao anatintsika ny miresaka amin’ny namana na ny mpiara-miasa aloha voalohany indrindra rehefa tojo fahasahiranana. Tsy ratsy akory izany ary manana ny toerany manokana, kanefa ny vavaka no tokony hatao voalohany indrindra sady tokony “hatao mandrakariva”.
Miantomboka amin’ireo teny hoe “mivavaha mandrakariva” ny Efes. 6:18 sady mitohy ihany koa amin’ny hoe “miambena”. Inona no zavatra tokony hiambenantsika ary inona no antony?
Rehefa tao Getsemane i Jesôsy, dia nilaza tamin’i Petera sy ireo mpianatra hafa izay hitany fa natory mba hiari-tory sy hivavaka (Mar. 14:38). Mialoha io toe-javatra io anefa Jesôsy dia efa nampitandrina ny mpianatra (Mar. 13:33-37). Raha ny fomba fijerin’i Lioka, dia tsy misaraka amin’ny vavaka ny fiambenana ary zavatra tokony hatao mandrakariva izany satria manome tanjaka ny fanahin’ny Kristianina. Voatsindry manokana ny fivavahana ho an’ny hafa ao amin’ny Efes. 6:18. Tsy misy isalasalana fa rehefa mivavaka ho an’ny hafa isika, dia manjary matanjaka ara-panahy ihany koa sady vonona kokoa hiatrika ny tolona miseho eo na inona endrika hisehoan’izany na inona.
Nahoana no zava-dehibe kokoa ho an’ny fanahintsika ny mivavaka ho an’ny tenantsika noho ny hoe ny hafa no manao izany ho antsika (na dia ilaina aza izany)? Inona no soa entin’ny vavaka manokana ataonao ho an’ny tenanao, izay tsy azon’ny vavaka ataon’ny hafa atao?